ရေကြီးနိုင်ခြေ « MMWeather Information BLOG
By mmweather.ygn, on August 18th, 2012%
သြဂုတ်လ ၁၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KAI-TAK သည် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းစွန်း Lai-Chau ပြည်နယ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်သို့ အားပျော့လာလျှက်ရှိပါသည်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KAI-TAK သည် သြဂုတ်လ ၁၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၈၃၀ နာရီမတိုင်မီ တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား Guangxi ပြည်နယ် Fangchen Gang မြို့အနီးမှ ကုန်းတွင်းကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်၊ ကုန်းတွင်း မုန်တိုင်းအဖြစ် အနောက်တောင်ဘက်သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲကာ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း၊ Lang Son ပြည်နယ်၊ Bac Giang ပြည်နယ်နှင့် Bac Ninh ပြည်နယ်ရှိ . . . → Read More: တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KAI-TAK ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KAI-TAK တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on August 17th, 2012%
သြဂုတ်လ ၁၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KAI-TAK သည် တရုတ်ပြည် တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား Guang Dong ပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ Zhanjiang မြို့နှင့် Leizhou မြို့များ ကြားမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ တုံကင်ပင်လယ်ကွေ့မှတစ်ဆင့် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းနှင့် တရုတ်ပြည် တောင်ပိုင်း နယ်စပ်အနီးမှ ကုန်းတွင်းသို့ ထပ်မံ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KAI-TAK ၏ အရွယ်အစားမှာ အချင်း ၆၆၅ ကီလိုမီတာ Size (in Diameter): 665 km (360 nm) [Average] . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KAI-TAK တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized မိုးရေချိန်နှင့် ရေကြီးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေ